Xildhibaan Cabdirixmaan Ibbi Oo Sheegay sababta loo sugi la’yahay Amniga Muqdisho:-(Dhageyso) – hareerley News
Xildhibaan Cabdiraxmaan Xaaji Adan ( Ibi) oo kamid ah Xildhibanaada golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo Galabta ka qeyb-galayay munaasabad soo dhaweyn ah oo muqdisho loogu qabtay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay Caasimadda in aysan dhismeen hadii aanan la garab istaagin maamulka gobalka banaadir.
Waxaa uu sheegay in magalada Xamar aysan nabad noqoneyn,isla markaana aysan dhismeen hadii dadka muqdisho aysan daacad ka noqon bixinta Canshuurta iyo la Shaqeynta Maamulka gobolka Banaadir.
Hadalka Xildhibaan Cabdiraxmaan Xaaji Aadan ( Ibi) oo kamid ah Xildhibanaada golaha Shacabka ayaa kusoo aadaya xilli Siyaasiyiin iyo dad badan ay dhowr jeer Madaxda dowladda ugu baaqeen inay xooga saaraan sugida amniga Magalada Muqdisho.
R/W Kheyre oo Amrey in Maamul Goboleedyada & G/Banaadir la siiyo Lacago ay uga hortagaan Covid-19
Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Feedraalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, ayaa amar ku bixiyay in dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir si degdeg ah lagu gaarsiiyo lacago ay u adeegsadaan ka hortagga iyo la tacaalidda cudurka Covid-19. Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo caawa guddoomiyay kulanka joogtada ah ee Guddiga Qaran ee ka Hortagga Covid-19 oo […]
Dr. Fuje Oo Imaamyada Masaajida Ugu baaqay in ay qaataan talooyinka Caafimaadka
Dr. Maxamed Maxamud Cali (Fuje) oo ah Lataliye Sare ee Wasaaradda Caafimaadka ayaa bulshada u diray fariin wacyigelineed, gaar ahaan Imaamyadda Masaajidda Muqdisho oo uu sheegay in aysan qaadan talooyinkii Caafimaadka ee Wasaaradda. Waxaa uu sidoo kale sheegay in ay xaqiiqo tahay in gudaha Masaajida Muqdisho oo dad badan ay isugu yimaadaan uu ka faafayo […]
Itoobiya oo cambaareysay rabshadaha ka socda Koonfur Afrika
Itoobiya ayaa kamid ah dalkii ugu dambeeyay ee Afrikaan ah oo dhaleeceeyo rabshadaha iyo weerarada lagu beegsanayo ganacsatada ajaanibta ah ee ku sugan Koonfur Afrika. Qoraal ay barta Facebook soo gelisay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa lagu yiri “Waxaan cambaareyneynaa falalka gurucan oo lagula kacay dadka ajaanibta ah oo ay kamid yihiin muwaadiniinteena ku sugan […]
Guddoomiyayaasha Baarlamaanada Soomaliya iyo Jabuuti Oo Gaarey Beydhabo